Nagarik Shukrabar - ‘कमजोर लेखक पुरस्कार नपाउँदा रुन्छ’
शनिबार, ०६ कार्तिक २०७८, ११ : ४९
शुक्रबार, २९ भदौ २०७५, ०६ : ०१ | प्रजु पन्त
लू, उलार, घामकीरी, निदाएँ जगदम्बा लगायतका चर्चित पुस्तकका लेखक नयनराज पाण्डेको २०७४ सालमा प्रकाशित संस्मरणात्मक पुस्तक ‘यार’ले दुई लाख रुपैयाँ राशिको पद्यश्री पुरस्कार पाएको छ । पुरस्कारको घोषणापछि उनीसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी ।
मदन पुरस्कारको उत्कृष्ट ८ मा परेको ‘यार’ ले पद्यश्री पुरस्कार पो पाया है, सुन्दा कस्तो लाग्यो ?
पुरस्कार पाउँदा खुसी नै छु । पुरस्कार पायो भनेर उत्ताउलो भने हुनुहुँदैन । पुरस्कार पाउनु भनेको पाठकको माया स्नेह प्राप्त गर्नु हो । पुरस्कारले ऊर्जा नै प्रदान गर्छ । मदन पुरस्कारमा परेको पद्यश्रीले पायो भन्ने कुरामा केही अनौठो जस्तो लाग्दैन । दुवैको निणार्यक कमिटी छुट्टै हुन्छ । कुन कमिटीलाई कुन किताब मन पर्छ भन्ने कुरा हो । तराजुमा सुन जोखे जसरी किताब तौलिइन्न क्यारे, यो २४ क्यारेट यो २२ कयारेट भन्नलाई । निर्णायक मण्डललाई कुन मन पर्छ भन्ने कुरा हो ।
पुरस्कार पाउँदा र नपाउँदाको अनुभव ?
‘यार’ तपाईंको अन्य पुस्तकमध्ये अलि बढी आलोचना भएको पुस्तक पनि हो । यसैबाट पुरस्कार पाउनुभयो । आफैँलाई ‘यार’ कस्तो लाग्छ ?
म कुनै किताब निकाल्दा आफू सन्तुष्ट नभई निकाल्दिन । आफू सन्तुष्ट नभइञ्जेल पुनर्लेखन गरिरहेको हुन्छु । यो किताब लेख्दा आख्यानमा जस्तो परिकल्पना गर्नु थिएन । के लेख्ने होला भन्ने पनि थिएन । गैरआख्यान भएकाले सकेसम्म सुन्दर शैली दिने प्रयास गरेँ । मलाई मन नपर्ने कुरै भएन ।
अलि बढी नकारात्मक टिप्पणी भएको त हो नि ?
हैन । मैले नकारात्मक टिप्पणी पाएको छैन । मेरो फेसबुक ट्वीटरतिर हेर्नु भयो भने पाठकको प्रतिक्रिया देख्नुहुन्छ ।
धेरै पाठकको मन जितेको ‘लू’ले मदन पुरस्कारै पाउने चर्चा भएको थियो तर पाएन । अन्य पुस्तक पनि सूचीमा मात्रै परेका थिए । ‘यार’ र ‘लू’मध्ये तपाईंलाई चैं कुन मनपर्छ त ?
उलार, घामकीरी मनपराउने पाठक पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । यसले पुरस्कार पायो उसले पायो भन्ने हुँदैन । त्यो त निर्णायक कमिटीको हातको कुरा भयो । कृतिका रुपमा मलाई त सबै राम्रो लाग्छ । त्यसैले कुनै एउटा मन पर्ने नपर्ने भन्ने हुन्न । ‘लु’ र ‘यार’मा तुलना हुनै सक्दैन । ‘लु’ आख्यान भयो, ‘यार’ गैरआख्यान ।
आफ्नै कृतिमध्ये कुनैमा राम्रो गरियो वा कुनै अलि कमजोर भएछ भन्ने त हुन्छ होला नि ?
लेखेर अहिलेसम्म म सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । लेखेर सन्तुष्ट भएको दिन म लेख्नै छाड्छु ।
आफ्नो स्तुति गाएको भन्दै संस्मरणहरु प्रायः आलोचित हुन्छन् । तपाईंको संस्मरण यो पाटोमा भनेजोगियो । ‘यार’मा आफूलाई पूरै खुलाउनुभएको हो ?
संस्मरण भनिसकेपछि ढाँट–छल गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । जस्ताको त्यस्तै नलेख्ने भए कथा बनाए भइहाल्यो । संस्मरण भन्ने अनि झूटको पुलिन्दाले किन भर्ने ?
यसमा धेरै मान्छेसँग भएका तीतामीठा सम्बन्धलाई उल्लेख गर्नुभएको छ । जसको बारेमा लेख्नुभयो, उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
मैले यस पुस्तकमा आफैँलाई खुलाएको छु । आफ्ना कमी–कमजोरीलाई उल्लेख गरेको छु । ‘यार’मा कसैको व्यक्तिगत कुरामा दख्खल पुग्ने गरी उल्लेख गरेको छैन । नाम उल्लेख गर्न मिल्नेको गरेको छु, नमिल्नेको गरेको छैन । ज–जसको उल्लेख गरेको छु, उहाँहरुले राम्रो लेखिस् भन्नुभएको छ ।
तपाईंको लगातार निस्किएका कृतिमध्ये कुनै हिट, कुनै मध्यम किन ?
हाम्रा हातका पाँच औँला पनि बराबर कहाँ छन् र ? यस्तै हो, पाठकको रुचिअनुसार फरक हुन्छ । कसैलाई ‘सल्लीपिर’ धेरै मन पर्यो, कसैलाई ‘घामकीरी’ । पाठकले दिनुभएको प्रतिक्रियालाई स्वभाविक रुपमा लिन्छु । तर्क–वितर्क झैँ–झगडा गरेर हुन्न ।
अहिले के लेखिरहनुभएको छ ?
अहिले नयाँ उपन्यासको काममा लागिरहेको छु ।
कस्तो प्रकारको भन्न मिल्छ ?
तराई–मधेसको विषयवस्तुलाई उल्लेख गर्न खोजिरहेको छु ।